I-European Union ihlangene neChina izohola Isivumelwano SaseParis | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isivumelwano SaseParis iqale ukusebenza futhi iphawule ingqophamlando emlandweni wokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Kodwa-ke, ukungena kukamongameli wase-United States kaDonald Trump bekungezona izindaba ezinhle kwiplanethi yethu.
Siyakukhumbula lokho UDonald Trump uyaphika ukuguquguquka kwesimo sezulu Futhi-ke, i-United States ngeke ihole Isivumelwano SaseParis yize singesinye sezikhulu ezibhekele ukukhishwa kwe-CO2 ezingeni lomhlaba. IKhomishani yaseYurophu Yezenzo Zesimo Sezulu Namandla, UMiguel Arias Cañete, uqinisekisile namuhla ukuthi i-European Union izohola kanye neChina ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu, manje, manje kunanini ngaphambili, esidinga amazwe aqinile ukuyilwela.
1 Abaholi Esivumelwaneni saseParis
2 Finyelela imodeli engenakhabhoni ngo-2050
3 Izinhlelo ezintsha zokuguqula amandla
Abaholi Esivumelwaneni saseParis
UCañete usevele wakhumbula lokho ku isivumelwano sangaphambili seKyotoI-United States nayo yashiya futhi ayizange ithobele izivumelwano ezisunguliwe. Kodwa-ke, kulokhu kuhlukile. Inyunyana yawo wonke amazwe ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu iya ngokuya ibambeka.
Umthetho olandelwayo waseKyoto usasebenza kuze kube unyaka we-2020, okuzoba lapho uzothathelwa indawo yiSivumelwano SaseParis. Siyakhumbula ukuthi, yize iSivumelwano SaseParis sesiqale ukusebenza, siphokophela ukukhulisa izindlela ezisebenza ngesimo sezulu kanye nezindlela zokusebenzela obala ngaphambi konyaka wezi-2020, ukuze kulezi zingqungquthela kutholakala imithetho eyenza iSivumelwano SaseParis sisebenze. Iphinde isebenze ukubeka izisekelo zamazwe ukuthi zisebenzise izinhlelo zawo zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu kusukela ngo-2020.
Ngokombono ka-Arias Cañete, I-European Union ikulungele ukuhola ukuguqulwa kwamandla kuya kumodeli entsha yokuthuthukiswa kwekhabhoni ephansi. Ngaphezu kwalokho, uyazi ukuthi isimo lapho ungakutholi ukwesekwa okuvela e-US esake saba nakho ngaphambili, futhi ukuze ukwazi ukuqhubeka phambili. Kuyi-EU futhi enezinhloso ezibaluleke kakhulu zokunciphisa igesi futhi esekela kakhulu amazwe asathuthuka.
Finyelela imodeli engenakhabhoni ngo-2050
UCañete ukhumbule ukuthi i-European Union isabele izigidi eziyi-17.600 kwizimali zezulu ngonyaka wezi-2015, ukuthi ama-90% ezinsizakusebenza ze-International Climate Change Adaptation Fund anikelwe yisifunda, esibuye sanikela nge-4.700 billion ku-Green Climate Fund, cishe ingxenye yesabelo salesi sikhwama.
Nciphisa ukukhishwa kwe-CO2 emhlabeni jikelele bese uhola phambili ekuguqulweni kwamandla kuyinselelo enkulu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Ukuze kufezwe lezi zinhloso zokuvelela, kuyadingeka ukulungiselela nokucacisa umthetho odingekayo ukuhambisana neSivumelwano SaseParis. UCañete uveze ukuthi i-EU izobhalisa uhlelo lwe-decarbonisation oluchaza indlela yokuthi ingakhiphi i-CO2 ngo-2050.
Kepha-ke, isinqumo sikaCañete sidinga ukubamba iqhaza kwawo wonke amazwe angamalungu e-European Union. I-European Commission izodinga iZwe ngalinye lamaLungu ukufezekiswa kohlelo olunzulu lwezamandla namandla wesimo sezuluOkusalungiswa kufanele kulethwe ngo-2018 ukuze kubuyekezwe futhi kuvunyelwe ngokulandelayo ngo-2019, usuku lapho izwe ngalinye kufanele futhi ukuthi liphothule khona isu lalo lokukhishwa kwe-decarbonization ngonyaka ka-2050.
Izinhlelo ezintsha zokuguqula amandla
Ukuze kubhekwane nezinguquko ezidingekayo ukuhola phambili ukuguqulwa kwamandla, uCañete uyakuqinisekisa lokho Impikiswano evundlile kufanele ivulwe ukuze ikwazi ukwenza izinhlelo zamandla nesimo sezulu. Ngaphezu kwalokho, uHulumeni kumele abandakanye ikhomishini yezindaba zezomnotho ekulungiseleleni uhlelo, ngoba lokhu akuwona umthwalo weminyango yezamandla nezemvelo kuphela.
Ukufeza ukuguqulwa kwamandla kuya kumodeli yentuthuko ehlanzekile futhi esimeme ngokwengeziwe, kubalulekile ukuthuthukiswa kwamandla avuselelekayo futhi sikhuthaze izibonelelo ze-R & D zokuthuthukisa nokuqamba ubuchwepheshe obuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla. Kudingeka izinqubomgomo zesikhathi eside kohulumeni hhayi izinqubomgomo ezihlose ukunqoba ukhetho kuphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-European Union ihlangene neChina bazohola Isivumelwano SaseParis
Angicabangi ukuthi umuntu onjengoMnu Cañete, owathi lapho engena embusweni wayenazo zonke izimpahla zakhe kumasheya eRepsol, wasifanelekela isikhundla asiphethe. Izinselelo zango-2050 zibukeka zingenakuqhathaniswa kimi. Ngalolo suku ukuguquka kwesimo sezulu kuyobe sekudala umonakalo omkhulu. Kuzoba yimakethe uqobo ebeka imihlahlandlela yokwehlukaniswa komnotho kwezomnotho futhi laba bahlonishwa bayazi ukuthi le makethe izothuthuka ngokushesha okukhulu kunalokho abakuhlosile.
Phendula ama -luggs amabili
Uqinisile kangakanani Ukuguquka kwesimo sezulu kwenza into yaso namuhla futhi kuzoba kubi kakhulu. Sethemba ukuthi ushintsho lwamandla luzofika ngokushesha kunalokho abakulindele.
Siyabonga ngokuphawula kwakho, imikhonzo !!
Ukubheja ngonyaka ka-2050 kubukeka njengesifiso esiphansi kakhulu. Sonke siyayazi imiphumela ukulethwa kwesimo sezulu okuyobe kuyilethile ngalolo suku. Ngenhlanhla, imakethe yezimoto ezivuselelekayo nezimoto ezisebenza ngogesi izothuthuka ngokushesha kunalezi zinhloso zokuqhubeka.
Uqinisile. Isivumelwano saseParis asinazibopho uma sikhumbula umphumela omncane weSivumelwano saseKyoto. Ngaphezu kwalokho, lesi Sivumelwano asikhulumi nganoma yini maqondana nokukhishwa kwe-methane, okungenye yezinkinga ezinkulu ezingadala ukuthi zonke izinyathelo ezithathwe yilesi Sivumelwano zenziwe ize.
Siyabonga ngokuphawula kwakho! =)